Ngwunye Sifọ, Mgbaaka Mgbapu, Nkọwapụta - Chenxi
Anyị na-emepụta nha, ụdị, ihe dị iche iche, ibipụta nka na ibe; ahaziri gị arịrịọ. Site na ala ugboro ole na ole-elu ugboro ma ọ bụ ị nwere ike họrọ mbụ ma ọ bụ dakọtara ibe. Onweghi usoro iwu kachasi enyere anyi aka igha azaghachi ihe nile ndi ahia anyi choro.
nyochaa nchịkọta anyị
ihe nyocha maka oge obula
Kenkwucha & untingchụ nta Riflescope Factory
* Dabara maka ogologo nso agbapụ, nnukwu egwuregwu ịchụ nta, sinipa agbapụ, wdg * First Focal Plane design for direct size akakabarede nke lekwasịrị anya. * Premium ngwa anya arụmọrụ na ibu na-enwu gbaa echiche na ezi na agba nsụgharị. Anya m niile Band sara mbara nke nwere ọtụtụ mkpuchi * Extra Long Eye-relief na nnukwu Ubi ...
3X30 Tactical Prism Gun Rifle Akpa
Modeldị ihe atụ: SCOC-20 Calypos Magnification: 3x Ebumnuche Lens Dia: 30mm itzọ ọpụpụ Nwa akwụkwọ: 10 mm Ogologo: 124mm (4.9 inch compact version) Elu: 76mm (3.0 inch) Weight (net): 435g (15.3 ounce) Anya Enyemaka: 90mm ( 3.5 inch
Tactical 3X-Fts Magnifier Rifle Scope with Flip-to-Side Mount.Ha
Ezubere ngwa anya a ka o dakọtara na nlele holographic na ihe ngosi maka imewanye arụmọrụ na mgbanwe kachasị n'ọhịa. Ihe nwucha a bụ ngwa zuru oke maka ndị ọrụ agha, ndị mmanye iwu, ndị na-agba egwuregwu, na ndị dinta. Ntinye aka n'akụkụ ugwu na-enye onye ọrụ ...
Untingchụ nta Riflescope Reflex Red DOT Sight Fit Night Night 20mm Qd Weaver Mount
Gosiputa njedebe dị elu iji zute arịrịọ dị elu Red na Night Vision 3 MOA Dot Sight Light and Compact Heavy Duty Ezubere maka Real Fire Caliber Windage na elu nwere ike gbanwee ma chegharịa Motion Sensor, akara uhie na-enwu na-akpaghị aka mgbe ọ na-eche ọ bụla vibration na Ọnọdụ Sra rụọ ọrụ ...
3 égbè huntchụ nta agha kenkwucha riflescope 3-9 × 32
Igwe anya anya dị elu na ihe mkpuchi zuru ezu na-ewepụta onyonyo na-egbukepụ egbukepụ HydroShield lens mkpuchi na-enyere aka idobe ihe onyonyo doro anya, n'agbanyeghị ọnọdụ ihu igwe BIJIA SureGrip na-ebupụta ihu igwe maka mfe adusting ọ bụla ọnọdụ agbapụ ederede: 3 - 9 x 32 A / O Ubi nke echiche ...
Nkwado & Enyemaka
ANY SO OWU OZI